ထိုင်းနိုင်ငံကို ကျွန်မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးတဲ့ ရာမမ...
19 เม.ย. 2562 - 01:57 น.
ဆွစ်ဇာလန်မှာ ဥပဒေပါရဂူဘွဲ့ယူဖို့ ပြန်ခါနီး ရက်ပိုင်းမှာ သေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဘိသိက်မခံရခင် ကံကုန်တဲ့ဘုရင်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
อัลบั้มภาพ ထိုင်းနိုင်ငံကို ကျွန်မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးတဲ့ ရာမမင်းဆက်